Casemiro Oo Isbarbar-dhig Ku Sameeyey Zidane, Mourinho, Solari & Ancelotti, Kana Hadlay Xaaladda Real Madrid Ee Waqtigan – Latest Sports News
Casemiro Oo Isbarbar-dhig Ku Sameeyey Zidane, Mourinho, Solari & Ancelotti, Kana Hadlay Xaaladda Real Madrid Ee Waqtigan
Xiddiga reer Brazil ee Casemiro ayaa ka hadlay kala duwaanshaha tababareyaashii Real Madrid soo maray sannadihii ugu dambeeyey ee Jose Mouirnho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidan iyo Santiago Solari, waxaanu dul istaagay mid walba sidii uu ahaa dhaqankiisa waqtigii uu joogay Real Madrid.
Kubbad-burburiyaha reer Brazil ayaa safka koowaad ee Real Madrid isku muujiyey xilligii uu tababaraha ahaa Carlo Ancelotti, hase yeeshee waxa uu lama taabtaanka aanay cidina ku qabsanin booska dhexda difaaca xigta uu noqday markii uu Zinedine Zidane shaqada kala wareegay Rafa Benitez.
Casemiro oo u warramay telefishanka Esporte Interativo ayaa waxa uu ugu horreyn isbarbar-dhig ku sameeyey tababareyaashii uu kula soo kulmay Real Madrid iyo hab-macaamilkoodii, waxaanu yidhi: “Caddaalad maaha haddii aan si gaar ah u tilmaamo tababare. Mourinho, Ancelotti, Zidane, Rafa Benitez… mid kastaaba wuxuu lahaa hab-dhaqankiisa gaarka ah.
“Zidane xidhiidho badan ayuu la lahaa ciyaartoyga, sida xidhiidh aabo iyo wiilkiisii, sida xidhiidh saaxiibtinimo. Solari waa sidoo kale, qof kasta caddaalad ayuu u sameeyaa.”
Intaas kaddib, Casemiro wuxuu si daacadnimo ah uga hadlay xaaladda Real Madrid ee waqtigan oo ay rajo la’aan ka yihiin dhamaan tartamada marka laga reebo Champions League, waxaanu yidhi: Waa iska caadi in koox hoos u dhacdo, anaguna waqtigan waanu koraynaa, waxa noogu muhiimsanna waa Champions League. Waxa naga horreeya kooxo adag, waxaananu diiradda saaraynaa inaanu dhamaantood kaga guuleysano koobabka, wayse adag tahay.”
27 jirkan khadka dhexe waxa kale oo uu ka hadlay ciyaarta caawa ay ku martigelinayaan Ajax, waxaanu tilmaamay inay tahay mid adag marka la eego qaabkii ay kooxdani ula soo ciyaartay Bayern Munich iyo sidoo kale kulankii ay martiga ugu noqdeen Amsterdam ee ay guusha 2-1 kasoo gaadheen.